တစ်ဦးကရထားတွင်ကလေးများနှင့်အတူစီးသည်သိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > တစ်ဦးကရထားတွင်ကလေးများနှင့်အတူစီးသည်သိကောင်းစရာများ
ကလေးတွေနှင့်အတူမိသားစုများအတွက်, ရထားပေါ်တွင်လေးတွေနှင့်အတူစီးနင်းနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်နိုင်ပြီး ခရီးသွားလာတတ်နိုင်လမ်း. သငျသညျအမြိုးသားတို့နှင့်အတူခရီးထွက်ကြသောအခါဒါဟာအစဖြစ်ကောင်းအများဆုံးသက်သာနှင့်အနည်းဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုင်. ကျနော်တို့ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွားဘာနေပါစေ daunting ဖြစ်ပါတယ်သိကြ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်း, ဒါကြောင့်သင်ကမီးရထားပေါ်လေးတွေနှင့်အတူစီးနေလျှင်. ဤတွင်အချို့သောအကြံပေးချက်များများမှာ!
မိသားစုများလက်မှတ်တွေကောက်ယူနှင့်ရထားပေါ်တွင်အတူတကွကောင်းသောထိုင်ခုံကိုရှာဖွေစောစောဘူတာရုံရချင်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျထိုင်ခုံ reserved ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ထိုင်ခုံတစ်ဦးပထမဦးဆုံးလာပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်, ပထမဦးဆုံးအခြေခံတာဝန်ထမ်းဆောင်, ဒါကြောင့်သင်ဆိတ်ကွယ်ရာဖြစ်လိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်တစ်ဦးအနေအထားတွင်မှီဝဲရကြဘူး.
ရထားခရီးစဉ်အပေါ်လေးတွေနှင့်အတူစီးနင်းသင့်ကလေး၏မှေးအချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင်, ဒါကြောင့်သေချာသငျသညျပွငျဆငျနေကြသည်အောင်. တစ်ခေါင်းအုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်အကြိုက်ဆုံး blankie နဲ့တူနှစ်သိမ့်ပစ္စည်းများကိုယူခဲ့.
တစ်ဦးအဘို့သင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ရထားခရီးစဉ် (ဒါဟာတာရှည်မယ့်အထူးသဖြင့်လျှင်) သငျသညျဧည့်ခံကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရန်တာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်သင့်တယ်.
အများဆုံးမိဘများအတွက်တစ်ခုသိသာရွေးချယ်မှုအနည်းငယ်ကစားစရာဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ် home ကနေသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးရောက်စေဖို့ပါလိမ့်မယ်. : Pမိန်းကလေး '' လက်သည်း aint, စာအုပ်တွေဖတ်ပါ, UNO play, စာအုပ်တွေထဲမှာအရောင်ကိုဆောင် ခဲ့., နှင့်အော်ဒီယိုစာအုပ်များနားထောင်ရန်.
အခြား အကြီးအစွန်အဖျား ရထားပေါ်တွင်လေးတွေနှင့်အတူစီးဘို့ကို download လုပ်ပါရန်ဖြစ်ပါသည် ရုပ်ရှင်တွေ သင့်ရဲ့ Device များပေါ်တွင်သင်အိမ်မှာနေနှင့်ဝင်ရောက်ခွင့်အခါ ဝိုင်ဖိုင်.
ရှိပါတယ် ကားတစ်စီးထိုင်ခုံလိုအပ်ချက်များကိုသို့မဟုတ်ထိုင်ခုံခါးပတ်အရိပ်လက္ခဏာစွဲစေခြင်းမရှိ, ဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုသင်မထိုက်မတန်မြင်သည်အတိုင်းရထားအကြောင်းကိုရွှေ့ဖို့အခမဲ့များမှာ! ကလေးတွေနှင့်အတူရထား Exploring သိမ်းပိုက်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်.
အဲဒီမှာခရီးစဉ်အပေါ်ဖြစ်ခြင်းထက်ပိုဆိုးဘာမျှမင်နှင့်သင့်အဝတ်အစားတွေနေဖြင့်မည်သည့်လမ်းအတွက်နှောင့်နှေးလျက်ရှိ. နှစ်သိမ့်အဘို့အဝတ်စားဆင်ယင်! ကျနော်တို့ breathable အကြံပြု, ဆွဲဆန် ့. အဝတ်အစားများနှင့်အဆင်ပြေဖိနပ်ရထားပေါ်တွင်သင်၏အတွေ့အကြုံကပျော်မွေ့နိုင်ရန်အတွက်. အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားမြင်းစီးသူရဲများလွန်းနေအိမ်ထဲကနေအနည်းငယ်သေးငယ်သက်သာဆောင်ခဲ့အကြံပြု, တစ်စောင်သို့မဟုတ်ပစ်ကာခေါင်းအုံးနဲ့တူ.
လုပ်ဖို့ left ရဲ့အားလုံးပြန်ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးအပေါ်လေးတွေနှင့်အတူမြင်းစီးအနားယူနှင့်ပျော်မွေ့ ရထားအတွေ့အကြုံကို. အဲဒီမှာရတဲ့တစ်ဝက်ပျော်စရာသောကွောငျ့!
ကျွန်တော်တို့ကိုမှာကျွန်တော်တို့ကို tweeting အားဖြင့်သိပါစေ @SaveATrain! , သငျသညျ၏အောက်ခြေပေါ်မှာငါတို့ကအခြားလူမှုရေးလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Saveatrain
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Friding-with-kids-on-a-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
europeantravel ကလေးတွေ longtrainjourneys trainmovies ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ် ခရီးသွား Travelingtips Travelingwithkids Travelingwithkidstips traveltips